Shigenchi nke China
China ezigbo ndụ
Ozi bara uru na China
Chinese mmụta etu esi mara
Okwu Chinese eji eme ihe
Ibi mba ọzọ
Ozi bara uru maka ịkwaga mba ọzọ
Ngwongwo bara uru maka ibi ná mba ọzọ
Plastic nlereanya mmepụta
Ihe ndekọ ederede
[Ọbụna ma ọ bụrụ na ibi na mba ofesi] Nchịkọta nke 3 atụ aro ihe mmụta mmụta n'ịntanetị maka ụmụ akwụkwọ elementrị na nke obere
Ngwa XNUMX akwadoro maka ibi ndụ dị mfe na China
Ihe 11 dị mkpa na ihe ndị akwadoro iji weta si Japan mgbe ha bi mba ọzọ
[Bara uru] Ihe iri na otu tụrụ aro ka gị na ụmụaka soro gaa mba ọzọ
Nchịkọta nke mmiri ahụ mgbe ịlaghachi China na Japan n'ihi corona
Rita ọpụrụiche Kyushu site na ịtụ ịtụ kama njem - Meat
Zụta ndị ọkachamara obodo na nri pụrụ iche site na saịtị azụmaahịa wee chee na ị gara njem ma ọ bụ nwee mmetụta dị ka ọgaranya.Onye njikwa nke ndụmọdụ nri Kyushu, onye si Kyushu, gbalịrị ịnakọta nri a tụrụ atụ.
Na-ewebata okwu ụfọdụ dị mfe ịmehie (siri ike icheta) na Chinese na otu esi echeta ọmụmụ onwe onye
Enwere okwu ụfọdụ na Chinese nke dị mfe ihie ụzọ (siri ike icheta).Ndị a bụ ụfọdụ mmeghe nke okwu ndị ahụ na ụzọ ụfọdụ iji cheta ọmụmụ nke m.
Ribe nri pụrụ iche Kyushu site n'inye iwu kama ị ga njem-Mentaiko
Zụta ndị ọkachamara obodo na nri pụrụ iche site na saịtị azụmaahịa wee chee na ị gara njem ma ọ bụ nwee mmetụta dị ka ọgaranya.Onye nchịkwa nke ndụmọdụ nri Kyushu, onye si Kyushu, gbalịrị ịnakọta nri mentaiko.
Ihe ndị a zụrụ na Taobao (Taobao) na Jindong (Kyoto)
Mgbe ha bi na China, ọtụtụ mmadụ na-azụ ihe na ntanetị, belụsọ maka nri enwere ike ịchekwa.N'isiokwu a, m ga-ewebata ụfọdụ ụdị ọrụ m zụrụ ugbu a.
Nchegbu, ọghọm, nsogbu na ọgwụgwọ maka ibi mba ọzọ [Narusa]
Shigenchi Expatriate Overseas Enwere m nsogbu na nke a N'isiokwu na otu esi ekpori ndụ ndị mbịarambịa ugboro abụọ, edere m gbasara uru dị na mba ofesi, mana n'ezie enwere ọtụtụ nsogbu (ọghọm).Karịsịa ma ọ bụrụ na gị na ezinụlọ gị na-eme njem, nsogbu ga-aba ụba.nke a ...
[Na saịtị] Otu ị ga-esi nwee ọ doubleụ n'ozi gị na mba ofesi.
E nwere ụzọ dị iche iche esi ebi ofesi, dị ka ịnwale ịnọ n’obodo mepere emepe, ma ọ bụ ịnọ n’obodo mepere emepe.Peoplefọdụ ndị nwere ike ọ gaghị achọ ya.Otú ọ dị, ka ndị dị otú ahụ na-adịkwu, otú ahụ ka ha na-enwechaghị nchekasị site n’ịdọnyere ndị obodo ahụ ruo ókè o kwere mee.
Mgbe ị bi mba ọzọ na nke mbụ ya, ị na-eche ihe ị ga-eweta.Mụ onwe m, ọ dị m otú ahụ.Ọ ga-amasị m iwebata ihe ndị m tụrụ anya na nke m chebere mgbe m kwagara mba ọzọ.
Banyere mmụta dị n'ịntanetị maka ụmụ akwụkwọ elementrị na nke obere, anyị achikotara atụmatụ, ụgwọ, uru na ọghọm dị na mgbakwunye ihe ọmụmụ, oke iwe, yana ihe nkuzi atọ akwadoro.Echere m na mmụta ntanetị dị irè maka ụmụaka bi mba ọzọ ma ọ bụ enweghị ike ịga ụlọ akwụkwọ Japan maka ọtụtụ ihe.
Klaasị nwere ike gbue oge ma ọ bụ buru ụzọ were ihe nkuzi dị n'ịntanetị na-enweghị ọkwa "Surara"
Ọbụna usoro mmụta ịntanetị nwere ike ịme maka oge igbu oge na ịsụ ngọngọ.Nwere ike ịga klaasị na klasị gara aga ma ọ bụ nke gara aga, ma ị nwere ike ibute ihe ọmụmụ kachasị amasị gị.Onye nchịkwa ahụ ga-ahaziri gị mmụta ahụ, yabụ ị ga-amụ otu esi mụta ihe dị ka nne ma ọ bụ nna.
Corona Forties onye na-ede blog dị iche site na igbu oge.Ndụ ndị China / ngwa ndị China / Chinese / Njem.M na-atacha ọnụ mgbe m mehiere maka onye China na China, mana enwere m nkụda mmụọ na isi 6 nke nkuzi onwe onye HSK nke 165
2020 afọ 12 ọnwa1
2020 afọ 11 ọnwa4
2020 afọ 10 ọnwa5
2020 afọ 9 ọnwa8
2020 afọ 8 ọnwa15
2020 afọ 7 ọnwa20
2020 afọ 6 ọnwa22
2020 afọ 5 ọnwa16
Category Họrọ udi Ihe ndekọ ederede Nyocha ngwongwo China ezigbo ndụ Ozi bara uru na China Chinese nke Emebere na China Chinese ngwa Nkuzi Ọmụmụ ihe n'ịntanetị Chinese nke Chinese mmụta etu esi mara Okwu Chinese eji eme ihe Ibi mba ọzọ Ngwongwo bara uru maka ibi ná mba ọzọ Ozi bara uru maka ịkwaga mba ọzọ hobii Plastic nlereanya mmepụta Njem
Etu esi eji ngwa Waimai.Ọnọdụ nnyefe China kachasị ọhụrụ [ngwa ọkọlọtọ ndị China]
Otu ntụgharị asụsụ Chinese maka otu esi eji ntụgharị asụsụ Hyakudo na atụmatụ ya [Standard app]
Otu esi eji DiDi (tụlee), ọbụlagodi na ịnweghị ike ịsụ asụsụ Chinese, were tagzi gaa ebe ị na-aga.Ndị na-eme njem azụmahịa nwekwara ike iji ya [ngwa ọkọlọtọ ndị China]
Copyright © Ikike niile echekwabara.